भोली जेठ ४ गते शनिवार , तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् तपाईको राशीफल !
भोली मिति बिक्रम संवत २०७६ साल जेठ महिनाको ४ गते शनिवार तद अनुसार सन् २०१९ मे ९ तारिक अर्थात् भोलि बुद्ध जयन्ती तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस तपाईको भोलिको राशिफल !
सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। अचानक धन लाभको योग रहेको छ। परिवारिक जीवन सुखमय बित्नेछ। बौद्धिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। बोल्दा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ।
शारीरिक एवम मानसिक रुपमा स्वस्थताको अनुभूति हुनेछ। निर्धारित समयमा योजना अनुरुप कार्यमा सफलता मिल्नेछ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ। अधुरा रहेका कार्यहरु पुरा भएर जानेछन। सहकर्मीको साथ र सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। शुभ समाचार सुन्ने योग रहेको छ।
अनावश्यक बादविवाद र मनमुटावमा सहभागी नहुदा नै राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा बिशेष ध्यान दिनु पर्नेछ। सन्तान सुख मिल्ने छैन। पेटसम्बन्धी समस्याले सताउने छ। नया कार्यको थालनी सकेसम्म नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। भोलिको दिन सकेसम्म यात्रामा नानिस्कादा नै राम्रो हुनेछ।
मानसिक रुपमा उत्साहमा कमि आउने छ। परिवारमा अनावश्यक झैँ झमेला उत्पन्न हुन सक्नेछ। धनहानी भएर जानेछ। समयमा भोजन नमिल्नाले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिन सक्नेछ। अनिन्द्राले सताउने छ।
परिवार र इष्टमित्रको प्रसस्त साथ र सहयोग मिल्नेछ। रमणीय स्थानमा घुम्न जाने अवसर मिल्नेछ।कार्यमा सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र लाभदायक रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि भोलिको दिन सुखमय बित्ने देखिन्छ।
पारिवारिक वातावारण आनन्दमय रहेको छ। अपेक्षा गरे अनुसार कार्यमा सफलता मिल्नेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। स्वादिष्ट भोजनको अनुभूति हुनेछ। यात्राको सम्भावाना रहेको छ। बौद्धिक क्षेत्रमा सहभागी नहुदा नै राम्रो हुनेछ। अनावश्यक खर्च हुनबाट बच्नु पर्नेछ। बिद्यार्थीवर्गका लागि समय अनुकुल रहेको छैन।
आर्थिक योजनाका कार्यहरु योजना अनुरुप सम्पादन भएर जानेछ । व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। दृढविश्वासका साथमा कार्य गर्नाले सफलता मिल्नेछ। आत्मविश्वासमा वृद्धि भएर जानेछ। मनोरन्जनात्मक कार्यको पछाडी धन खर्च भएर जानेछ।
शारीरिक शिथिलता र मानसिक चिन्ताले सताउने छ। स्वास्थ्यमा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। परिवारमा अनावश्यक मनमुटाव हुने सम्भावना रहेको छ सावधान रहनुहोला। मनोरन्जनात्मक कार्यको पछाडी धन खर्च भएर जानेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। समग्रमा तपाईको लागि भोलिको दिन लाभदायक रहेको छ।
आर्थिक , पारिवारिक एवम सार्वजनिक क्षेत्रमा लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। साथीभाइका साथमा रमणीय स्थानमा घुम्न जाने अवसर मिल्नेछ। दाम्पत्यजीवनमा खुसियाली छाउने छ। व्यापार व्यवसायका लागि समय लाभदायक रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि भोलिको दिन लाभदायक रहेको छ।
व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ मिल्ने देखिन्छ। आयआर्जनका नयाँ स्रोतहरु खुलेर जानेछ। अचानक मित्र भेटको सम्भावना रहेको छ। सन्तान सुखको अनुभूति मिल्नेछ। सामाजिक एवम सार्वजनिक क्षेत्रमा मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ।
अचानक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिने छ। मनमा उत्साहको कमि भएर जानेछ। मनोरन्जनात्मक कार्यको पछाडी धन खर्च भएर जानेछ। यात्राको सम्भावना रहेको छ। विदेशस्थित आफन्तजन मार्फत शुभ समाचार सुन्न पाइने छ। सन्तान सुख मिल्ने छैन। यात्राको सम्भावना रहेको छ। समग्रमा कुम्भ राशी हुनेहरुका लागि भोलिको दिन मिश्र फलदायी रहेको छ।
धार्मिक एवम आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जानेछ। स्वास्थ्यमा बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। अनावश्यक कार्यमा धन खर्च हुने सम्भावना रहेको छ। पारिवारिक सुखको अनुभूति हुनेछ। आकस्मिक धन लाभ हुने सम्भावना समेत रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ मिल्ने देखिन्छ।समग्रमा मिन राशी हुनेहरुका लागि भोलिको दिन सुखमय बित्ने छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ ०३, २०७६१४:१०
भोलि जेठ ५ गते आइतबार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् तपाईको राशीफल !